Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Jaceylka Ah Ee Namastey London Kaaso Maanta Oo Kale La Daawaday!! – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Jaceylka Ah Ee Namastey London Kaaso Maanta Oo Kale La Daawaday!!
Namastey London waa mid kamid ah filmada Akshay kumar ugu sheekada wanaagsan ee uu sameyay waana fariin jaceyl oo Classic ah, Filmkaan waxaa wada jileen Akshay Kumar, Rishi Kapoor, Katrina Kaif iyo kuwa kale waxuuna noqday Semi Hit ama guul dhex dhexaad ah.
Halkaan Hoose Kaga Bogo Xaqiiqada FIlmkaan Laga Diiwaan Galiyay:
Xaqiiqada 1aad: Akshay Kumar waxuu shaaca ka qaaday in qisadan ay ku dhacday saaxiibkiisa nolosha dhabta ah waxuuna Akki goaansaday inuu sheekadas xaqiiqada ah film ka sameyo.
Xaqiiqada 2aad: Waa Filmmki ugu horeyay ee Akshay Kumar iyo Katrina Kaif ay wada sameyaan ee guulesta ama filmkii kowaad ee guul wacan u gaaro ee ay wada sameyaan ayuu noqday.
Xaqiiqada 3aad: Filmkaan waxaa laga tirtiray muuqaal ay Katrina Kaif ku dhexjirto musqusha dhexdeeda misane ay xirantahay dhar aad u gaa gaaban oo qaawani ah waana laga tirtiray muuqaalkas sababo qaas ah.
Xaqiiqada 4aad: Waa filmkii kowaad ee Katrina Kaif codkeeda rasmiga ah ku hadasho kadib filmka Boom maadama loo codeyn jiray.
Xaqiiqada 5aad: Filmkaan dhanka Box-officeka waxuu ka gaaray guul wacan asigoo noqday Semi Hit sido kalena heesahiis aqarkoda ayaa gadmeen.
Xaqiiqada 6-aad: Mashruucan qeyb labaad ayaa laga sameeyay oo loogu magac daray Namaste England waxaana wada hogaamiyeen Arjun Kapoor iyo Parineeti Chopra balse waxuu noqday film fashilmay oo guul daro weyn la kulmay ganacsi ahaan.
Xaqiiqada 7-aad: Doorka Upen Patel waa loo codeeyay oo qof kale ayaa u hadlaayo dhanka codka luuqada hindiga maadama xirfadan uusan ku wanaagsaneen.
Xaqiiqada 8-aad: Akshay Kumar iyo Katrina Kaif waxay wada sameyeen aflaam sida “Humko Deewana Kar Gaye” (2006), “Namastey London” (2007), “Welcome” (2007), “Singh is Kinng” (2008), “De Dana Dan” (2009), iyo “Tees Maar Khan” (2010).